भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ जिउदो दाहिने शंखलाई बेवास्ता नगरी दर्शन सोरुप एक शेयर गर्नुहोस तपाईको जीवनमा शान्ति र खुसि मिल्नेछ ! – " कञ्चनजंगा News "
भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ जिउदो दाहिने शंखलाई बेवास्ता नगरी दर्शन सोरुप एक शेयर गर्नुहोस तपाईको जीवनमा शान्ति र खुसि मिल्नेछ !
No Comments on भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ जिउदो दाहिने शंखलाई बेवास्ता नगरी दर्शन सोरुप एक शेयर गर्नुहोस तपाईको जीवनमा शान्ति र खुसि मिल्नेछ !
प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न प्रयोजनमा ल्याइने शंख एक प्रकारको समुद्री चिप्लेकिराको कडा आवरण हो यो समुन्द्रको किनार मा पाईने गर्दछ।धार्मिक अवसर एवम् सांस्कृतिक कार्यमा यसलाई फूकेर बजाउन पनि सकिन्छ।
शंख महाभारतमा वर्णित एक राजा विराटको एक पुत्रको नाम पनि थियो। यो हिन्दु धर्ममा अति पवित्र मानिन्छ। यो धर्मको प्रतीक मानिन्छ। यो भगवान विष्णुको दायाँ माथिल्लो हातमा शोभायमान देखिन्छ।
बिहान र बेलुकी आरती गर्दा शंख बजाइन्छ । पूजापाठ सुरू गर्दा र सकिने बेलामा पनि शंख बजाइन्छ । कतिपय जातिमा मुर्दालाई घाट लैजाँदा शंख बजाउने चलन छ । रूपमा प्रयोग[सम्पादन गर्ने]आयुर्वेद उपचारमा शंख भस्मको ठूलो महत्त्व छ । शंख भस्म बनाउन शंखलाई माटोको भाँडोमा राखेर पाँच/छ फिट गहिरो खाल्डोमा गुइँठाले पोलेर निकाली घ्यूकुमारीको रसमा पिन्नु पर्छ । यसमा क्याल्सियम, क्याल्सियम सल्फेट, म्याग्नेसियम आदि तत्त्व प्रसस्त पाइन्छन् ।
← रवि लामिछानेको टिभी कर्मलाई म पत्रकारिता मान्दिनँ ,त्यो त लतार्ने, चिथोर्ने, टोक्ने र गिजोल्ने काम हो-बरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल (भिडियो सहित) → प्रधानमन्त्रीलाई केही व्यक्तिद्वारा कालो झण्डा देखायो,दुई जना प्रहरीको नियन्त्रणमा